Ungaita Sei Kuti Uve Unyanzvi Uye Wekumiririra: 5 Hapana Matipi Asina Kufanira! - Blog
Ungaita Sei Kuti Uve Unyanzvi Uye Wekumiririra: 5 Hapana Matipi Asina Kufanira!
Wati wamboona here kuti vanhu vane hutsinye vakatendeseka vanowanzo tarisa zvakanyanya pa hutsinye chikamu pane iyo akatendeka chikamu?
Kuvimbika kusina kusefa kunogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uchiedza kutsvaga nzira kwayo. Dzimwe nguva isu tese tinogona kushandisa chaiyo cheki iyo inouya kubva kune chaiyo uye yakatendeka nzvimbo.
Dambudziko rekuvimbika kwehutsinye nderekuti richiri kungofungidzira. Zvinofungidzira kuti munhu anonzwa kuvimbika kwehutsinye anozove nekukura mupfungwa kana nzwisiso yekutarisa kupfuura mazwi asina kunaka.
Maitiro aunopa meseji akakosha seizvo chaizvo zviri meseji. Nekutsamwisa vateereri pamberi kana panguva yekuendesa meseji, iwe unoshandura kutarisisa kwavo kubva kumessage kuenda kune yavo kutsamwa.
kuvimba sei mushure mekunyeperwa
Vane utsinye vakatendeseka vanhu havawanzo hanya nazvo. Kutendeseka kwavo kunowanzo kuve kwega, kunyangwe kana kuri kwechinangwa. Mushure mezvose, kana vane hanya nezvekuita chaiko uye nekubatsira munhu wacho, vangave vanofarira kuona kuti vanonzwa meseji pane kumhanyisa pfungwa pasi pehuro.
Izvo hazviite kuti vave vanhu vakaipa kana vanokuvadza, zvakadaro. Vamwe vanhu vangori vasina kunaka nekutamba kwenzanga, kana iri mhando yezano uye chimiro chekuendesa chavangade kugamuchira kubva kune vamwe.
Ndipo panopinda hunyanzvi nehunyanzvi.
Chii chinonzi ungwaru uye kudyidzana?
Kufamba nemagariro zviitiko hunyanzvi hwakakosha hwekuita chero chinhu chine musoro kuti chiitwe. Dhipatimendi kugona kupinda mune izvo zvemagariro mamiriro, kufambisa kutaurirana, uye kutungamira munhu wese kugadziriso chaiyo.
Unyanzvi hwakasiyana mukati medanho rekutaurirana hunogona kuita kuti zvive nyore kana kuomarara.
Iwe unofanirwa kuve nemasimba akakurisa pamusoro pemanzwiro ako. Mumiriri haakwanise kuwira mukutsamwa kwavo, kushushikana, kana kusuwa pavanenge vachiedza kushanda kuburikidza nemamiriro ezvinhu.
Kubudirira kudyidzana kunoda mwero wehukama hwepamoyo nekuti kudzikama kwako kunoziviswa kune vamwe vanhu vane chekuita nekukonana. Zvinotaridza kuti hausi hako kutora divi, kana kuti kana iwe uri kutora divi, chinzvimbo chako chiri kubva kunzvimbo yakadzikama uye inofungidzirwa.
Dhipatimendi inoda kuteerera kwakanaka. Asi kuva muteereri akanaka zvinopfuura kungonzwa izvo izvo munhu ari kuedza kutaura.
Kana iwe uri kuyedza kuve wediplomatic, kunyangwe iri neboka revanhu kana munhu akasarudzika, pane mukana wakanaka wekuti mamiriro acho ari kufashukira nemanzwiro.
Vanhu vepamoyo vanowanzove nenguva yakaoma kuratidza zvizere ivo uye kutaura kwavo manzwiro. Vamwe vanhu vane nguva yakaoma neizvozvo kunyangwe panguva dzakanakisa. Kuti uve muteereri wezvematongerwo enyika, zvinobatsira kuverenga ruzivo rwuri pakati pemitsara uye rwakavigwa pasi pemanzwiro.
Dhipatimendi inoda kuti iwe utaure zvaunofunga. Sezvaunotora ruzivo kubva kumapati ane chekuita nemakakatanwa, zvinobatsira kudzokorora pfungwa dzavo nezvinetso sezvaunovanzwisisa. Izvi zvinobvumira vamwe vanhu kuti vagadzirise kana kusimbisa maonero aunoita ruzivo, izvo zvinokubatsira iwe kuunza munhu wese padhuze nesarudzo ine musoro.
Kubvumirana ndechimwe chinhu chakakosha mukudyidzana. Ruremekedzo ruregerero mamiriro ezvinhu apo mapato ese akakanganiswa anogona kubva pahurukuro agutsikana.
Vanhu vazhinji vanonzwisisa vari kuzonzwisisa kuti havagone kuwana zvese nenzira yavo vega. Vanhu vanonzwisisa vanozoziva kuti vamwe vanhu vane basa, uye vangangoda kupa zvimwe zvinhu kuti vasvike pakati nepakati.
Kuwana iyo yepakati nzvimbo dzimwe nguva kungave kwakaomarara, kunyanya kana uri kubata nechimwe chinhu chega. Unogona kuona kuti unopa zvakawandisa kana kushoma kana iwe usina miganhu ine hutano.
Kungwara hunyanzvi pasi peamburera yedhipatimendi. Kungwara kuziva kuziva zvekutaura uye zvausingataure. Kungwara kuziva kuziva nguva yekutaura uye nguva yekunyarara. Kungwara kuri kukwanisa kutaura chokwadi chinokuvadza nenzira inoremekedza uye inokudza munhu anenge achiteerera, saka vane mukana wekunzwa meseji yako.
Kungwara ndiko mutsauko pakati pekutaura:
“Urikuita kunge chikwee chaicho. Unozviziva?'
'Hasha dzako nehasha zvinotyisa, uye handifarire kuitwa kuti ndinzwe kusagadzikana.'
Unoita sei kukudziridza hunyanzvi hwehunyanzvi uye hwekudyidzana?
Nzira chete yechokwadi yekuvandudza hunyanzvi ndeyekudzidzira, kudzidzira, kuita. Kunyanya paunogona kuve nehungwaru uye nedzemumiriri, zviri nyore kuwana.
Haasi iwo hunyanzvi hwaunogona kudzidza mushe kubva mubhuku nekuti kuverenga bhuku hakupe mamiriro akapomerwa kana kupokana uko kudyidzana uye kungwarira zvakanyanya.
Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe haufanire kurwira kuti uite zvikamu zvakasiyana zve diplomacy. Unogona kudzidzira munzvimbo dzakasiyana dzemagariro uye kuvagadzirira kuenda kana mhirizhonga ikaitika.
Heano zvishanu zvakakosha zvekuita nehunyanzvi uye nediplomatic.
1. Dzidzira kuteerera.
Kuteerera kuteerera kwakasiyana nekuterera kwekungoteerera nekuti urikupa kutarisisa kwakazara kumukurukuri.
Dzima mimhanzi, zvigadzirwa zvemagetsi, terevhizheni, isa nharembozha kumeso patafura, uye tarisa zvakananga kumunhu ari kutaura, kunyanya nekutarisana nemaziso.
Ita nhanho yekutarisa kwete chete pamashoko avo asi nemitauro yemuviri inofambidzana neaya mazwi. Chii chiri chimiro chavo chechiso chiri kukuudza iwe? Ndeupi mutauro wavo muviri wakaita? Vari kuzvidzivirira here? Kukuvara? Suwa? Kutsamwa? Hasha? Pusa? Chii chiri kutaurwa kunze kwemazwi?
Kana vachinge vapedza kutaura divi ravo remamiriro ezvinhu, zvitaurire kwavari seizvi. 'Kana ndikunzwisisa zvakanaka, dambudziko nderekuti'
Nenzira iyoyo, kana iwe uchida kupa kuraira kana kupa mazwi enyaradzo, iwe unenge uine yakajeka mufananidzo sezvinobvira nezvekuti chii chinetso kana gakava iri.
2. Imbomira, nyatsofungisisa mazwi ako, wobva wataura.
Mhinduro yemanzwiro haiwanzo sarudzo chaiyo yekufamba nemamiriro ezvinhu.
Saka usati wataura chero chinhu, imbomira, tora nguva shoma kuti utarise kuti kana mazwi auri kuda kutaura anonyatso kuratidza mamiriro acho ezvinhu, wobva wataura.
Vamwe vanhu vanogona kuwana izvi zvisina kujairika kunze kwekunge vakuziva iwe mushe. Ungangoda kuvaudza chimwe chinhu senge, 'Ndinoda maminiti kuti ndimbofunga pfungwa dzangu uye kuti ndotaura sei.' Vazhinji vanhu vane musoro vanongoti 'zvakanaka' uye vokupa iyo nguva yaunoda.
Icho chikonzero cheichi ndechekuti iwe haugone kusunungura bhero. Kana iwe ukataura chinhu chisina kunaka nekuda kwehasha kana kushungurudzika, haugone kuzvitaura. Zvese zvaunogona kuita panguva iyoyo ndezvimwe zvinodzora kukanganisa, chinova chinhu chinofanirwa kudzivirirwa.
Masekonzi mashoma ekufungisisa mazwi ako usati wataura anogona kukuserera maawa ekushanda kwepfungwa uye kupokana.
3. Zvibvunze kuti, “Izvi zvinoda kutaurwa here? Ndingataura sei izvi zvine ruremekedzo? ”
Chikamu chakakosha kwazvo cheungwaru kudzidza kuti usataure riini.
Nzwisisa kuti mune akawanda mamiriro, kunyanya kana iwe ukaedza kubatsira vamwe vanhu kuwana resolution, yako pfungwa haina kuverenga chero chinhu.
Ivo vane avo maonero, uye ivo vari kutsvaga kufamba nenzira idzodzo pane kuita madhaka emvura mberi.
Pfungwa yauri kuda kutaura inoda kutaurwa here? Uye kana zvirizvo, inoremekedza vatori vechikamu mumakakatanwa nehurukuro? Zvinokuremekedza here?
Kana iwe ukafunga kuti maonero ako achabatsira, dzokera kunongedzo yapfuura uye umbomira usati wataura chero chinhu. Ipapo, dzivisa kunyora zvinhu nenzira inorwisa mumwe munhu, zviito zvavo, kana maonero avo.
maitiro ekukunda kushinhwa neshamwari
Panzvimbo iyoyo, ipa pfungwa dzinovaka nenzira yakanangana ne “ini” zvirevo kuti zvive pachena kuti hausi kutaura chokwadi chakazara kana mirairo, asi uchitaura mazano kana maonero.
Saka, iwe ungati:
'Ndinofunga unofanira kufunga nezvemabatiro aari kuita kwauri uye nekwaunogumira.'
'Iye anonetsa uye unenge uri nani kumurasa nekuti unokodzera zvirinani.'
Neimwe nzira, kubvunza mibvunzo ingave nzira inobatsira yekuita kuti munhu kana vanhu vasvike pamhedziso yakavanakira, uye inokudzivirira iwe unoda kutaura chaiko chinzvimbo chako kana pfungwa:
“Unonzwa sei kana achikubata zvisina kunaka? Hunhu hwake here, kana kuti ari kungopinda panguva yakaoma? Munonzwa sekunge zvinhu zvinogona kuvandudzika here kana imi mose mukazvishandira? ”
Kana iwe ukafunga kuti izvo zvauri kuda kutaura hazvinyatso kuwedzera chero chinhu chakakosha kuhurukuro, ingoenderera mberi kurega mumwe munhu kana vanhu vataure. Kana iwe ukaramba wakanyarara, iwe ungazoshamiswa nemaitiro anoita vamwe vanhu kuzadza runyararo irworwo. Neimwe nzira, bvunza mimwe mibvunzo kuti uwane rwakawanda kana ruzivo rwakajeka pamamiriro ezvinhu.
4. Zvivakire miganhu ine hutano hwepamoyo.
Kiyi yekumira pakati pekukonana pasina kupiswa mukati mukuita ndeyekuti uve wakasimba miganhu yemanzwiro kuti uzvidzivirire.
Rega nyika nevamwe vanhu vashatirwe vakakukomberedza kana zviri izvo zvavachaita, asi iwe haugone kurega iwe uchikweverwa mune izvo kana iwe uchida kuve wezvematongerwo enyika uye akangwara.
Iwe haufanire kuzviita iwe chikamu chayo kana iwe usingade.
Miganhu yepamoyo inobatsirawo mukusatora zvinhu pachako. Dzimwe nguva vanhu vanotaura vakatsamwa, kana kuti vanoratidza chimwe chinhu chakaipa chingave chisina kunaka. Zvishoma pane izvo zvaunogona kutora pachezvako kana sechirevo chekuti ndiwe ani, wakadzikama uye kujekesa iwe uchave iwe kana iwe uchiita mukukonana kwenzanga.
Iko kugona kwekumira wakasimba nemaonero akajeka kunokubatsira kudzora uye kufamba nemamiriro ezvinhu.
5. Tarisa pane mutsa pane kunaka.
Iva nemutsa, asi haudi hako kuti uve wakanaka. Kuve wediplomatic uye kungwarira zvese ndezvekufamba nenzira dzakaomarara dzemagariro, idzo dzinowanzove dzisina kunaka.
Kuve wakanaka kuve mumwe munhu anofarirwa, munyoro, uye anowanzo fadza.
Kuva nemutsa kuita nenzira inobatsira iwe nevamwe vanhu.
Kutaura chokwadi, kuva nemutsa uye kuva akanaka hazviwanzo enda-mu-ruoko. Dzimwe nguva unofanirwa kutaurira vanhu zvinhu zvavasingade kunzwa, kana kuita kuti vazvionere vega zvinhu izvozvo.
kupomera mumwe munhu matambudziko ako
Dzimwe nguva iwe unofanirwa kuteerera kune vanhu vachichema kana kuvatarisa vachitambura kuburikidza nemamiriro ezvinhu anotyisa asingakwanise kuchinjwa. Dzimwe nguva iwe unofanirwa kutarisa yavo nyika ichipwanya kuita mamirioni zvidimbu.
Uye ndosaka kudyidzana uye kungwara zvakanyanyisa kukosha kupfuura kuvimbika kwehutsinye.
Iwe haudi kuti mazwi ako aputse nyika yemumwe munhu nenzira inozoita kuti zvivaomere kuti vadzose pamwechete. Mutsa, kutendeseka mazwi ane kuzvipira kusazvipira anogona kuita kuti nzira yekurapa nekuyananisa ive nyore kwazvo kune vamwe.
Maitiro Ekudzivirira Dhiraivhu Muhupenyu Hwako: 5 Hapana Matipi Matipi!
Zvinhu gumi Zvinoitwa Nevanhu Vane Tsika Uye Zvausingaite (kureva kuti Ungave Sei Netsika)
8 Mhando dzeKuteerera Dzinoshandiswa Nevanhu
Maitiro Ekuita Nevanhu Vasingakudi Iwe: 6 Anoshanda Matipi!
Maitiro Ekuita NeveMweya Vasina Njere Vanhu
Maitiro Ekukurira Kwako Kutya Kwekutarisana Uye Kuita Nekupokana
ini handichisina basa nezve chero chinhu
zvaunofanira kuita kana iwe uri kumba uri woga
tinga shandure sei nyika ive nani
nzvimbo dzekutora mukomana wako pazuva rake rekuzvarwa
murume wangu anondituka semwana mudiki